Horudhac: Chelsea vs Brighton & Hove Albion… (Blues oo caawa guul u baahan si ay ugu dhaqaaqo afarta sare ee Premier League) – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Brighton & Hove Albion… (Blues oo caawa guul u baahan si ay ugu dhaqaaqo afarta sare ee Premier League)
(London) 20 Abriil 2021. Chelsea ayaa ku soo dhaweyn doonta kooxda Brighton & Hove Albion garoonka Stamford Bridge caawa oo Talaado ah, iyadoo og in guul ay gaarto ay ugu dhaqaaqi doonto afarta kooxood ee ugu sareysa horyaalka Premier League.
Blues ayaa haatan ku jirta kaalinta shanaad ee Premier League, waxaana ay hal dhibic ka dambeysaa West Ham United, halka Kooxda Brighton ay fadhiso kaalinta 16-aad ee horyaalka, iyadoo lix dhibcood u jirta kaalimaha looga laabto horyaalka.
Andreas Christensen ayay u badan tahay inuu dib ugu soo laaban doono Chelsea kaddib markii uu saddex kulan la maqnaa dhaawac muruqa ah.
Thiago Silva ayaa la nasin karaa kulankan, iyadoo Tababare Thomas Tuchel uu ka walwalsan yahay in culeys badan uu qabo xiddiga reer Brazil, halka Mateo Kovacic uu sii joogteyn doono maqnaanshihiisa.
Daafacyada Brighton ee Adam Webster iyo Dan Burn ayaa loollan ugu jira inay ku soo bilowdaan safka hore, iyadoo labadaba ay ku soo laabteen shaxda kooxda kulankii todobaadkii la soo dhaafay ay barbaraha la galee Everton.
Aaron Connolly ayaa taam ah kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac ka soo gaartay cagta, halka Percy Tau laga yaabo in la soo xusho kulankan.
>- Kooxda Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah (unbeaten) 14-kii kulan ee ay wajahday Brighton tan iyo markii ay guuldarro kala kulantay kulankoodii ugu horreeyey ee ay kulmeen bishii Janaayo ee sanadkii 1933-dii, waxaana ay ka haystaan 12 guul iyo 2 barbaro.
>- The Blues ayaa guuleysatay dhammaan lixdii kulan ee tartan rasmi ah ee ay garoonkeeda kula ciyaartay Albion, iyagoo ka dhaliyay 14 gool oo jawaab la’aan ah.
>- Chelsea ayaa guuldarro la kulami karta labo kulan oo xiriir ah horyaalka iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda Stamford Bridge, kaliya markeedii saddexaad tan iyo markii uu Milkiile u noqday Kooxda Madaxweyne Roman Abramovich sanadkii 2004, waxaana ay horay u dhacday bishii November 2011 iyo December 2019.
>- Waxa ay lumiyeen siddeed dhibcood oo ka mid ah 15 kulan oo ay garoonkooda ku ciyaareen horyaalka, waan in ka badan mid kasta oo ka mid ah 23-kii xilli ciyaareed ee ka horreeyay fasal ciyaareedkii 2015-16.
>- The Blues ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay 14 ka mid ah 19 kulan oo ay ciyaartay tartammada rasmiga ah tan iyo markii uu tababare u noqday Thomas Tuchel.
>- Christian Pulisic ayaa dhaliyay saddex gool labadiisii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka, waana in ka badan inta uu dhaliyay 26-kiisii hore, waxa uuna raadinayaa inuu gool dhaliyo saddex kulan oo isku xigta oo Premier League ah markii labaad.
>- Brighton ayaa guuleysatay kaliya labo jeer sagaal kulan oo horyaalka ah oo ay ku jiraan mid ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeeyay ee ay ku ciyaartay garoonkeeda.
>- Waxa ay shabaqooda gool ka ilaashadeen 10 kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan, todobo ka mid ahna waa tan iyo bilowgii sanadka, waa rikoorkoodii ugu fiicnaa ee ugu sarreeyay tan iyo markii ay gaareen inay 14 jeer shabaqooda gool ka ilaashadaan fasal ciyaareedkii 1981-82.
>- Albion ayaa lumisay 20 dhibcood iyadoo hoggaanka u qabatay xilli ciyaareedkan horyaalka, waxaana ay sidaas kula biireen Spurs.